Deni oo hortagaya Baarlamaanka Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hortagaya golaha Wakiilada Puntland, iyadoo kulanka bannaanka looga saaray warbaahinta.
GAROWE, Soomaaliya - Madaxwey Siciid Cabdullaahi Deni ayaa khudbad ka jeedinaya fadhiga maanta ay ku yeelanayaan xarunta golaha wakiilada Puntland. Guddoonka Golaha Wakiilada Puntland ayaa qoraal uu u diray xubnaha wakiilada waxaa uu habeenkii Khamiista aheyd ku wargeliyay in sabtida ay u diyaar garoobaan Kulanka uu Golaha yeelanayo, isla markaana uu hor-imaanayo Madaxweyne Deni.
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa ay sheegeen in Madaxweyne Deni uu golaha uga warbixinayo ismarin-waaga ka taagan doorashada Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadan doonto Puntland muddo kordhinta labada sano ah ee loo sameeyay hay'adaha dowladda iyo madaxweyne Farmaajo, inkastoo ay qoraal horay usoo saartay madaxtooyada Puntland lagu diiday arrintaasi.
Shirkii fashilmay ee teendhada Afisiyooni iyo muddo kororsiga ay sameeyeen Golaha Shacabka ayaa waxay noqon doonaan labada qodob ee la is-dul taagi doono kulanka maanta oo la filayo in ay kasoo qeyb gali doonaan dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada Puntland.
Warbaahinta ayaa bannaanka looga saaray kulanka, mana la oga sababta keentay arrintaasi, iyadoo dadka qaar ay ku macneenayaan tallaabo lagu xaqiijnayo in lagu sugayo sirta maamulkaasi, inkastoo horay loo sii shaaciyay in kulanka looga arrinsan doono labada qodob ee taagan.
Taliye Xijaar: oo markaan Miyirkii u soo laabtay.